म,ध्य राती ढोका फो,रेर बला,त्का,र गर्न आउनेलाइ मु,ला झै छि,नाइदि,यिन …. – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/म,ध्य राती ढोका फो,रेर बला,त्का,र गर्न आउनेलाइ मु,ला झै छि,नाइदि,यिन ….
म,ध्य राती ढोका फो,रेर बला,त्का,र गर्न आउनेलाइ मु,ला झै छि,नाइदि,यिन ….
9,188 Less thanaminute
धनकुटा, २९ असोज । धन,कुटामा एक महिलाले आ,फूमाथि ब,ला,त्का,र गर्न खोज्ने पु,रुषलाई खु,कु,री प्र,हार गरी ह,त्या गरेकी छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका–१ मारेककटहरेमा एक महिलाले आफूमाथि ब,ला,त्का,र प्रयास गर्ने पुरुषको ह,त्या गरेकी हुन्् ।
मारेक,कटहहरेको घुमा,उँनेकी ३० बर्षीया क,मला गुरुङले ब,ला,त्का,र प्र,यास गर्ने स्थानीय लीलबहादुर गुरु,ङको ह,त्या गरेकी हुन् । ब,ला,त्का,र प्रया,स गरेपछि महिलाले प्रति,कारमा खु,कुरी प्रहा,र गर्दा उनको मृ,त्यु भएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ ।
राति ढोका फु,टाए,र आफूमाथि ब,ला,त्का,र प्रयास गरेपछि खु,कु,री प्रहा,र गरेको महिलाले बयान दिएकी छन् । प्र,हरीको प्रा,रम्भिक अनुस,न्धा,नले पनि ब,ला,त्कार,को प्रति,कारमा ह,त्या भएको देखिएको प्र,हरीले जनाएको छ ।
३० बर्षीय मृ,तक लीलबहादुर वि,वाहित रहेको र उनका दुई छोरा छन् । यता, बला,त्कार प्रयास गर्दा प्रति,कार गर्ने कमलाका श्री,मान बै,देशिक रोजगारीको सिलसिलामा करिब १५ महिना पहिले दुवई गएका छन् । उनी ११ बर्षे छोराको साथमा घरमा भएका बेला घट,ना भएको हो ।
मृ,तकको श,वलाई पो,ष्टमा,र्टमका लागि जिल्ला अ,स्पताल लगिएको छ ।
महि,लालाई पनि नि,यन्त्र,णमा लिएर घट,नाको बिषयमा थप अनु,स,न्धान थालिएको प्रह,रीले जनाएको छ । घट,ना मंगलबारराती करिब १० बजेको हो ।
भारतको इसारामा पार्टी फुटाउन र सत्ताका लागि चार भाइको रिहर्सल!